UThobani Nzuza ukhethe ukulingisa ngaphezu kokushayela amatekisi noma ukubulala abantu | Scrolla Izindaba
UThobani Nzuza ukhethe ukulingisa ngaphezu kokushayela amatekisi noma ukubulala abantu
Ngenkathi ekhulela emjondolo, uThobani Nzuza wabhekana nekusasa ebelibukeka linokukhetha okubili – kungaba ngumuntu obulalayo noma umshayeli wamatekisi.
Kodwa lo mlingisi oneminyaka engama-27 wase-Kranskop, eNyakatho ye-KZN, ovezwa ngelikaMndeni kwiHostela, uthole ukuthi impumelelo bekungafanele ize ngokubulala abantu noma ngokushayela itekisi. UThobani uthe ubefuna ukwenza imidlalo yeshashalazi hhayi okunye, ngoba kulapho uthando lwakhe lulele khona.
“Kodwa uWiseman Ncube odlala phambili kwiHostela ku-Season 1 ungigaugquzelile ukuthi ngiyokwenza inhlolokhono yokulingisa indawo kaMndeni. Kungimangazile ukuthi isenzo sami samukelwe khona lapho,” uyasho utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi kusukela lapho ukwazile ukulingisa emdlalweni owaduma kakhulu ku-SABC 1 Uzalo njengoKhehla nendima ku-Isipho ekhonjiswa ku-Etv “Ukube ngalalele abantu basemakhaya abakholelwa ekutheni ukuphupha okukhulu bekuwukuchitha isikhathi uma uhlala emjondolo ezindaweni zasemakhaya, bengingeke ngibe ngumlingisi namuhla,” uyasho.
Namuhla, ubuye abe ngumqondisi, umbhali wemidlalo yokudlala, umculi kanye nomdansi. Uneziqu ze-diploma kwezokulingisa nokukhiqiza azithola e-Durban University of Technology.
Uthe ukuthanda kwakhe ulimi lwendabuko kumenza ahluke kubantu abaningi abakulo mkhakha. “Ngiyaluthanda ulimi lwendabuko futhi ngizizwa ngiphelele uma ngiveza indima ezongivumela ukuthi ngiguqule amagama asohlwini ngifake amagama acebile esiZulu. Ngaleyo ndlela ngiyakwazi ukujabulisa ngenkathi ngifundisa abantu ngezilimi zomdabu ” uyasho.
UThobani uthe akaluthathi lonke udumo ngokunotha akuthola ngolimi lwebele.
“Ngeke ngilithathe lonke udumo. Ugogo wami uyisangoma futhi uyasiqonda isiZulu nemvelaphi yaso ngakho ngiyaye ngimbuze njalo uma ngihlela imibhalo. Umama naye uyangisiza ngoba ukhulele emaphandleni lapho isiZulu siwulimi olusemqoka khona.”